Indonesia in Focus: Dagaalka dhuumaalaysiga ah, si wax ku ool adkaaday Maraykanka ee Vietnam iyo Midowga Soofiyeeti ee Afghanistan
Dagaalka dhuumaalaysiga ah, si wax ku ool adkaaday Maraykanka ee Vietnam iyo Midowga Soofiyeeti ee Afghanistan
Kortaan ayaa waxaa ma uusan dhammayn (174)
(Qaybta boqol iyo afar iyo toddobaatan, Depok, West Java, Indonesia, January 2, 2015, 19:17 pm)
Kooxda sanadkii 1945-1950 loo yaqaan Darul Islam (DI) ee gobollada kala duwan ee Indonesia fallaaganimo ka dhanka ah Ciidamada Qalabka Sida Indonesian (Indonesia).
In South Kalimantan hawlaha galo xadka East Kalimantan Darul Islam koox uu hogaaminayo Ibn Xajar. Kooxdu waxay ka mid tahay koox ay adag tahay in ku garaacday, ka fiirsaneysa waxa ay isticmaalaan xoojiso dagaalka dhuumaalaysiga, xeeladaha ee orod weerar iyo, weerareen tuulada ama tuulo oo markaas jiray ordi shirkadda kaymaha marka ay timaado se ciidamada.
Agusno jirka, kuwaas oo ku soo biiray shirkada, sidoo kale waxaa ka mid ah jirka kale oo jirka Usman Rochadi soo qaatay midnimada Supplies oo ka mid ah Gaadiidka Taliska (Bekumdam) Balikpapan, u soo diray inuu kaymaha jaarka ah ee Bariga Kalimantan iyo South Kalimantan agagaarka soohdinta magaaladiisii ​​ee Aberdeen iyo Land Grogot dib loogu soo yeeri:
'' Marka aan ka mid ahaayeen koox si lama filaan ah ay weerareen ciidamada ee Ibn Xajar, inta badan ee xubnaha ah ayaa lagu dilay, waan ka badbaaday waayo qarsoon ee baadiyaha '',
'Waxay u muuqataa in ciidamada Ibn Xajar agagaarka jidhkayga, laakiin ma igu arki,' 'dagaalka aan awoowe qalabaysan salman Antong caleemo sort pandan iyo biyaha ee radi in ay jirka ka hor sameeyey, iyadoo kooxaha Dato wax akhriyaan, sidaas darteed wuxuu sheegay in cadowga nagu arki kari maayo haddii aan qarin ''.
Intaa waxaa dheer in Ibn Xajar koox askar Indonesia ayaa sidoo kale la isticmaalayo qaab jabhadnimo ah, kuwaas oo aad u awood badan marka loo isticmaalo kaymaha sida in Borneo.
Dagaalka dhuumaalaysiga ah ayaa wax tar markii dagaalyahanada ay la socoto ciidan ka soo horjeeda qaadato gumeystayaashii reer Holland, Japan, iyo Ingiriisi ee Indonesia.
Tabtii Tani waxay sidoo kale waa mid aad u fiican in dagaalkii Vietnam, marka Vietcong la ah qalab militari fudud Mareykanka oo ciidamo militari ah ka gees ah ka badan oo casri ah.
Sidoo kale wax ku ool ah marka Mujaahidiinta Afghan ka dhanka ah Soviet ciidamada dalka Afghanistan laga soo 1980 si 1988.
5 Expert dhac Khiyaamo The World War amaano
Vietnam ayaa laga badiyay hal geesi dagaal, Guud vo Nguyen Giap. Boqolaal kun oo dad eryay tagay vo Nguyen Giap, tiradaasi oo ah dagaalka ka dhanka ah gumeysiga Faransiiska iyo sidoo kale weeraro Maraykanka si uu u Vietnam.
Vo Nguyen Giap waxaa sidoo kale loo yaqaan mid ka mid ah sayidyadiinna ah istiraatiijiyadda dagaalka dhuumaalaysiga ah. Waxa uu ku hogaamiyay ciidamada weerarka Vietnam qabsdeen Bien Phu la baxyada.
Ka sokow vo Nguyen Giap, adduunka ogyahay badan oo sayidyadooda ee dagaalka dhuumaalaysiga ah. Mid ka mid ah waa kibirka guud ee Indonesia, General AH Nasution. Halkan inuu dib u eegista.
1. Guud AH Nasution
General Nasution loo yaqaan khabiir ku ah dagaalka dhuumaalaysiga ah. Khibradii sida khabiir dagaalka dhuumaalaysiga ah ayaa imaanaysa kadib markii oggolaansho Renville January 17, 1948. Waqtigaas ciidamada Siliwangi dhaqaaqay Central Java. Nasution markaas ku xigeenka Taliyaha Guud ee Ciidammada Qalabka. Ciidamada Indonesia marka ay rajeynayso in Netherlands ugu celin gardarada ciidamada I. Nasution ahaa qabyo iska caabin ah oo ka mid ah dadka caalamka oo dhan la xudunta u ah dagaalka dhuumaalaysiga ah.
General AH Nasution
In gardarada ciidamada II, Nasution waxaa loo magacaabay Taliyaha Ciidanka ee Java. Oo xarunteedu ku taal tuulo ku Prambanan iyo Kulonprogro, Nasution soo saaray tilmaamo kala duwan hirgelinta hannaanka dagaalka dhuumaalaysiga ah. Ka dib markii uu noqday Taliyaha Shaqaalaha, Nasution ahaa dadka naafada ah ay sabab u tahay dhacdooyinkii October 17, 1952. Nasution ayaa waxaa soo nooleeyey ee 1955 iyo dagaal fallaagonimo kala duwan.
General Nasution loo yaqaan qoraaga ah goolasha. Waxa uu ku qoray buugaag badan oo ka mid ah oo 11 muda Indonesian War of Independence Qiyaastii. Buug Principles of dhuumaalaysiga uu turjumay luqado qalaad oo kala duwan. Taas oo uu sheegay, ka bartaan kitaabka Nasution Vietcong intii lagu jiray dagaalka ka dhanka ah Maraykanka ee Vietnam.
Nasution sidoo kale ku qoray Greengrass cinwaankiisu Fulinta ku baaqay in Duty sida ugu badan 8 vols. Nasution dhintay on September 5, 2000 Meydkiisa waxaa lagu aasay Kalibata TMP ah.
2. vo Nguyen Giap
Hogaamiyaha Vietnam ayaa keentay military, Gen. vo Nguyen Giap oo jebin karaan ciidamada Faransiiska ee ay qabsdeen Bien Phu, ayaa shaaca ka qaaday qaar ka mid ah ciidamada xoogga qarsoon.
Dabayaaqadii April 1975, Vietnamese ciidamada North u suurtagashay in ay Maraykanka ka dhigi ciidamada iyo ciidamada South Vietnamese inay jilbaha ay. Dhacdadani waxa ay astaan ​​u calaamad murugo America markii Safiirka Maraykanka ee South Vietnam inuu u duulo by helicopter saqafka ka mid ah dhismaha safaaradda.
"Waxaan ku qasbay in ay waajahaan ugu awooda badan imbaryaaliyadda dagaal badan iyo naxariis la'aan. Socday dagaalka ayaa shan maamul shan Madaxweyne oo nagu waajahaan xoog aha kuwa aan qummanaynu," ayuu yiri vo.
"Haddii aan haysta qoriga ah, Vietnam ilaa istaagi karin oo ay baabbi'iyaan seacoast addoonsiga iyo markaas garaacday laba ihaaneeyo weyn in la xoreeyo oo quruun iyo dadka. Ha noo eegto dib ugu taariikhda kun oo sano, waxbarasho dhaqanka qaranka iyo dhaqanka iyo hiddaha military oo ka mid ah Vietnamese dadka, iyo sidoo kale u janjeera ee kacaanka Vietnam. "
Sida laga soo xigtay dad xoog Vietnamese been in falsafad horumarinta nolosha iyo dhaqanka waddaninimo ee ay xudunta u ah, (saara) ma siin ma waxay doonayaan in ay la dagaallamaan. Xoog ayaa la isticmaalay in ay ka gudbaan engegnaantiinna dabiiciga ah iyo gardarada shisheeye.
Naftiisa ka diiwaan gashan General vo ee taariikhda milatariga ee Vietnam sida xeelado milatari oo waa mid aad u cajiib ah, sida in ilaallo ay ciidamada Faransiiska ee ay qabsdeen Bien Phu 1954 iyo weerar TET (TET Offensive) ee Maraykanka ee South Vietnam ee 1968. istaraatijiyad waxa qasdigiisu waa dagaallama qaab dhuumaalaysi ah.
Ernesto Che Guevara waxa uu ku dhashay on June 14, 1928 Waxa uu si fiican u yaqaan El Che ama Che. Waxa uu ahaa, dhakhtar, caqliga, hogaamiyaha dhuumaalaysiga ah, diblomaasi, khabiir ku ah kacaan ciidamada waqti isku mid ah. Waxa uu jeclaa oo la neceb yahay by dad badan.
Che Guevara macnaheedu waxay noqon kartaa jacayl ama nacayb. Dadka qaarkood, magaca waa la mid ah sida halgankii loo soo maray xornimada, laakiin qaar kale waxay ka dhigan tahay dil. Magaca asalka ahaa Ernesto Che Lynch. Marka dhallinyarada ah Che lagu naaneyso 'Chanco' (doofaarka), maxaa yeelay, marar dhif ah qubeyska, si ur jidhkiisa. Wuxuu mar todobaad kasta bedelay T-shirts.
Che qoray kitaabka dhac Dagaalka ka dib markii kacaankii Cuba. Buuga ayaa waxaa lagu daabacay 1961 buug Che ayaa u adeegtaa sida hage loogu talagalay Ciidamada oo dunida dacaladeeda ah. Qaar badan oo ka tixraacaan mabaadi'da dhuumaalaysiga Che ku dhowaad sida ka kooban yahay buugga Mao. Laakiin Che ayaa sheegtay in ay weligiin akhriyin buuga ka mid ah Mao.
Mao Zedong wuxuu ahaa madaxdii reer China xisbiga shuuciga ah. Wuxuu madaxweyne ka noqday Dadka Republic of China ee 1949. Waqtigaas waxa uu ahaa in awood, dadka Chinese ka yar gacanta birta ah ku nool.
In dagaalkii sokeeye ee Shiinaha ka dhanka xerada Soomaalinimo, Mao keentay xeelado inta badan ay qaateen badan istiraatiijiyad dagaalka dhuumaalaysiga ah. Mao waa mabda'a ah istiraatiijiyad dagaal, sida ka soo horjeeda sare, waxaan u gurteen. Marka cadowgu la soo ururinayo, waxaan u dhibaateeyaan. Marka cadowgu waa daal, waanuna weerari. Marka cadowgu gurteen, noo raacdada. Mid ka mid ah hal kaas oo si degdeg ah ay qaateen sida calaamad u ah istaraatijiyad Mao waa jiid gacantaada hor inta uusan goolka. Sidaas afuufi ka soo noqon doonaa oo awood badan.
TE Lawrence ama Lawrence of Arabia ahaa dalxiisto ah istiraatijiyadda ciidamada Britain. Waxa uu sidoo kale ku qoray masterpiece ah "toddobada Tiirarka Wisdom" (1927). Waxa uu abaabulo Kacdoonkii Carabta iyo bilaaban dagaalka ka dhanka ah dalka Turkiga.
Waxa uu ahaa in gacan ka Emirates inta lagu jiro I. World War markii la Turkey qabashada
Waxa uu soo bandhigay aragti ah guddiyo maqaal uu ku qoray 1938. In uu article uu la barbar dhigo dagaalka dhuumaalaysiga ah la gaaska. Dowladda dagaalamay deegaanka howlgalka qaylya. Waxay ama bu'da unugga mashquulin meel aad u yar halka Moleekuleyaasha gaaska mashquulin meel ee muhiimka ah weel yar.
Dowladda hallayn karo kooxda ujeedooyin taatiko laakiin xilka hoggaamineed ee kala firdheen. Dagaal oo kale ah waa mid aad u adag tahay in la garaacday.
Lawrence halganka duubay ee "Lawrence of Arabia" markii ugu horaysay la sii daayay sanadkii 1962 la actor Peter O''Toole sida taariikhda qof actor ah. Filimka suurtagashay in ay hesho todoba Oscars oo ay ku jiraan filimada ugu fiican oo ah agaasimaha ugu wanaagsan ee David aan baruur.
From Wikipedia, encyclopedia xorta ah
"Dhuumaalaysi ah" iyo "dhuumaalaysiga War" halkan la isugeeyey. Wixii ciyaarta video ah, arki dhuumaalaysiga War (video kulankii) ah. Wixii isticmaalada kale, arki dhuumaalaysi ah (disambiguation).
Ma aha in lagu qaldo goriilla ah.
Dagaalka dhuumaalaysiga ah, waa nooc ka mid ah dagaal aan caadi ahayn oo ay koox yar oo ka tirsan sida dadka rayidka ah ama irregulars hubaysan oo isticmaalaya xeelado milatari, oo ay ku jiraan rag gaadmo ah, curyaamin, weerar, dagaal, xeeladaha saxaafadeed-oo-celis ah, iyo dhaqdhaqaaqa si ay ula dagaalamaan phone ciidan weyn oo yar-dhaqameedyada ,
Spanish duulaankii dhuumaalaysiga iska caabin ah France ee 1808
Erayga, qaab yar oo "dagaal" ee Spanish, waxaa caadi ahaan loo tarjumay sida "dagaallo yaryar", oo wuxuu ku yidhi, dhuumaalaysiga ah (dhawaaq Spanish: [ɡeriʎa]), ayaa loo isticmaali jiray in lagu qeexo fikradda tan iyo qarnigii 18aad, oo laga yaabo in ka hor. In Spain isticmaalka run, dadka xubnaha ka ah dhuumaalaysi ah waa guerrillero ([ɡeriʎeɾo]) hadduu lab, ama guerrillera haddii dumar ah. Ereygani waxa uu noqday caan ah intii lagu jiray Dagaalkii Peninsular ah, markii kooxda reer Spain kaceen ciidamada Napoleon iyo dagaal ka dhan ah ciidan aad u xoogbadan, isticmaalka istaraatijiga dhac ah.
The "dhuumaalaysi ah" waxa loo adeegsadaa in English bilowga ah ee 1809, si ay u sharxaan dagaalyahanada (tusaale ahaan, "magaaladii la qabsaday oo ay mucaaradka"), iyo sidoo kale (sida in Spain) si ay u muujiyaan koox dagaal ama urur. Si kastaba ha ahaatee, oo ku qoran luqado badan ayaa weli muujin ah dagaal style dhuumaalaysi ah qaarkood. Isticmaalka yar ku keeni karaan kala duwan ee tirada, baaxadda, iyo baaxadda dhexeeya ciidamada dhuumaalaysiga ah iyo rasmi ah, dalalka ciidan xirfad leh.
Xeeladaha, xeeladaha iyo ururka 
Xoogaga Boer inta lagu jiro Labaad Boer War ee Koonfur Afrika
A Kurdishka ee PKK dhuumaalaysiga ah ee Ciraaq Kurdistan oo qayb ka ah Kurdish-Turkish colaadda, 2008
Xeeladda iyo xeeladaha dagaalka dhuumaalaysiga ah u jenjeeraan inay isha ku dhawaad ​​isticmaalka, ciidan yar oo mobile in ay la tartamaan weyn, mid ka mid culus.  dhuumaalaysi ah diiradda saarayaa abaabulaan unugyo yaryar, taas oo ku xidhan taageerada dadka ku nool deegaanka, iyo sidoo kale ka faa'idaysanaya dhul waa la jaan qaadka badan oo ah unugyada yaryar.
Farsamo, ciidamada dhuumaalaysiga ah looga fogaado lahaa iska hor imaad ciidamada cadowga unugyada waaweyn, laakiin raadinta iyo baabi'inta kooxo yar yar oo askari si loo yareeyo khasaaraha iyo daadi xoogga soo horjeeda ee. Ma aha in shaqaalaha xaddido diirada ay, diirada cadow khayraadka sidoo kale ka doorteen. Dhammaan waxaa ka mid ah waa inay ku buriyaan xoogga cadowga, keenaya cadowga ugu danbeyn ma awoodaan mar kale in dembiga la oogo dagaalka, oo ku khasbay in cadowgu ku baxaan.
Waxaa inta badan loo fahmay in dagaalka dhuumaalaysiga ah, waa in ku lug sida dad rayid ah ku keeni karo ciidamada cadowga ay ku guuldareysato inay saaxiib u sheeg ka necbaa oo iska dhigaya. Si kastaba ha ahaatee, tani ma aha feature ugu weyn ee dagaalka dhuumaalaysiga ah. Nooca dagaalka lagaga dhaqmayaa karaa meel kasta oo meel ka tirsan in ay is dabooli iyo meesha faa'iidada aan laga faa'ideysan karaan ciidamada weyntahay oo ay ka caadiga ah.
Madaxda shuuciga sida Mao Zedong iyo Ho Chi Minh North Vietnam sidoo kale dagaal ku qaadeen oo suuragelinaaya habka teori u adeegta model ah xeeladaha la mid ah ee meelaha kale, sida Cuba "Foco" aragtida iyo mujaahidiinta anti-Soofiyeeti ee Afghanistan sida. 
Mao Zedong soo koobay ee qaab jabhadnimo aasaasiga ah bilowgii Shiinaha ee "Kacaanka Dagaalka Sokeeye Labaad" sida: ". Horumarka cadowga, waxaan Dumayn, xeryaha cadowga, waxaan dhibi taayirada cadowga, waanuna weerari, uga baxeen magaalooyinka cadowga, waxaan eryan" : p , 124 Ugu yaraan hal qoraaga xisaabin shuqullada hore Chinese of Art dagaalyahanka ah (oo ka soo jeeda ugu yaraan 200 BC) oo siinaya waxbarasho ku xeeladaha sida Mao :. Pp. 6-7
Haweenka Soviet Awliyadiisa hoos Sydir Kovpak ee degan-German Ukraine
Iyadoo xeeladaha ee casriga ah dagaalka dhuumaalaysiga ah ka timaada qarnigii 20aad, dagaal joogto ahayn, iyagoo isticmaalaya waxyaabaha markaas sifooyinka casriga ah dagaalka dhuumaalaysiga ah, waxaa jiray dagaalo badan oo ay la socdaan ilbaxnimo ee hore laakiin miisaan yar. Koboca ayaa dhawaan u waxyoonay qayb teori dagaal shuqullada dhuumaalaysi ah, laga bilaabo buuga de Guerra de jabhada by Ramón Matias Mella ku qoran qarnigii 19aad iyo, dhawaan, Mao Zedong On dhuumaalaysiga Dagaalka, Che Guevara ee dhuumaalaysiga Dagaalka iyo qoraalka Lenin ee isku magaca, oo dhan ka dib markii kacaankii si guul ah ku sameeyey by in China, Cuba iyo Russia siday u kala horreeyaan qoraal ah. Note waxaa astaan ​​u xoojiso dagaalka dhuumaalaysiga ah sida, sida ay sheegtay qoraalka ah ee Che Guevara, oo "isticmaalaan dhinacyada ay taageerayaan intooda badan, laakiin taas oo uu leeyahay tiro badan oo yar yar oo hub ah in la isticmaalo daafaca soo horjeedo dulmi". 
Main article: Taariikhda dagaalka dhuumaalaysiga ah
Qaab jabhadnimo ah in loo isticmaali karaa askar qabiil oo innoo ka dhanka ah cadowga qabiil. Caddeynta dagaalka caadiga ah, dhanka kale, ma muuqdaan ilaa 3100 BC ee Masar iyo Mesobotamiya. Tan iyo kutub ah, fikradaha sida waddaniyadda, afkaar, hantiwadaagga, iyo raacnimada diimaha ayaa door muhiim ah ka qaabaynta dagaal ciidamada iyo dhuumaalaysi ah. 
Tusaale ahaan muhiim ah oo ka dagaallama qaab dhuumaalaysi ah inta lagu jiro qarnigii 17aad ee Hindiya marka Maratha hoos imaanaya hoggaanka Chhatrapati Shivaji Raje Bhonsle (aasaasaha Empire Maratha ah) weeraray boqortooyada Muslim agagaarka Bijapur Saldanada iyo Qutub Shahi Empire, taas oo uu leeyahay ka faa'ideysatay tiro toos ah iyo ciidan faro badan, laakiin aqoonta yar oo ku saabsan qaabka juqraafi ee Ghats reer galbeedka iyo Oogada Deccan. Waxa uu urursaday ciidankiisii ​​yar oo si joogto ah xeryaha ciidamada weeraray oo ku guuleystay dagaalo badan kuwaasoo ahaa tirooyinka la taaban karo. Markaas, mabaadiida isku mid ah loo isticmaalo afgembigii tiranic Mughal Empire. 
Sidoo kale, qarnigii 17aad ee ciidamada Hindiya Jat, sida Gokula Raja Ram Jat, sidoo kale loo isticmaalaa Dhar (dhuumaalaysi ah) ka hor Mughals ah. Tirada askarta caadiga ah ma ahaayeen weyn laakiin waxtarka ay Dhar (dhuumaalaysi ah) xeeladaha iyo cad in weerar ku heyso inay ka dhanka ah ciidamada oo ka mid ah Mughal Aurangzeb weyn, oo ma aha oo kaliya celin ruuxa Jat la gariiriyey, laakiin sidoo kale fajac iyaga oo ku xoogga  sahlay in ay u adkeysan dambe halka ka dib ,
Main article: la-dagaallanka kacdoonka
Vendée tiro rasaas mucaaradka royalist ee galbeedka France, 1793
May Saddexaad 1808 by Francisco Goya, soo horjeeda show ah oo Isbaanish ah ay fulinayaan ciidamada Napoleon ee intii lagu jiray Dagaalkii Peninsular ah.
Xoogaga Polish Guutada Zośka xaday dharka Jarmal oo ku hubaysan hub laga xaday, dagaal ee Warsaw kacdoonkii, dagaal ee ugu weyn anti-Nazi ee Europe.
A xerada saldhig ka taagnaayeen Cong la gubay, My Tho, South Vietnam, 1968
A-dagaallanka kacdoonka ama counter  (oo istartiibiyo) hawlgallada lug ficilada ay dowladda aqoonsan quruun si loo xakameeyo ama damiyaan Gardarro la qaaday ka soo hor jeedda.  guud, mucaaradka ayaa isku dayaysa inay la burburiyo ama la saarto awoodda siyaasadeed ee dowladda si ay u difaacaan dadka ay raadinayaan in la xakameeyo, iyo ciidamada la dagaalanka burcad-mucaaradka isku dayaya in ay ilaaliyaan awoodda iyo in la yareeyo ama la baabi'iyo awoodda badalay mucaaradka. Hawlaha la-dagaallanka kacdoonka waa wax caadi ah intii lagu jiray dagaalka, shaqo iyo kacdoon hubaysan. La-dagaallanka kacdoonka laga yaabaa in xakamaynta hubeysan ee kacdoonka ka, oo ay weheliyaan xeeladaha sida qeybi oo xukun loogu talagalay in lagu jebin xidhiidhka ka dhexeeya ciidamada iyo dadweynaha, taas oo mucaaradka dhaqaaqo. Sababta oo ah waxa laga yaabaa inay ku adag tahay ama aan macquul aheyn in la kala saaro mucaaradka ah, oo taageere u ahaa Gardarro kuwa xubno ka mid ah aan dagaalamin, oo aan kulligood lug ku leeyihiin dadweynaha, howlgalada waxaa inta badan ka nastay farqiga u wareersan, relativistic, ama xaaladeed dhexeeya dagaalyahanno iyo kuwo aan dagaalameyn.
[Edit] mabda '
Dhuumaalaysi ah dhib ku noqon kara inay garaacdo, laakiin qaar ka mid ah mabaadiida dagaalka lagula dagaallamayo fallaagada, oo loo yaqaano tan iyo 1950 iyo 1960, waxaana uu si guul leh u codsatay la.
Tilmaamaha Qadiimiga ah 
La shaqee si weyn loo qaybiyey iyo saameynta badan ee Sir Robert Thompson, oo ah khabiir la-dagaallanka kacdoonka of Emergency Malayan ah, waxay bixisaa qaar ka mid ah tilmaamaha. Thompson waa siday maleeyeen dahsoon in gobolka yar ka go'an in ay ku dhaqanka sharciga iyo dawlad wanaagga. 
Qaar ka mid ah dawladaha, si kastaba ha ahaatee, ku siin fiiro yar si ay qadarintaasi, iyo howlaha la-dagaallanka kacdoonka ay ku lug tiro dil, xasuuq, cabsi, jir dil iyo dil.
Taariikhyahan Timothy Snyder qoray, "In gambanaya ee falalka burcad-xaglin, Germany dilay laga yaabaa in saddex meelood hal milyan oo qof, 350,000 ee Belarus oo keliya, iyo lambarada hoose laakiin marka la barbar dhigo ee Poland iyo Yugoslavia. Germany dhinteen in ka badan boqol kun oo reer Poland halka cadaadinaya Gardarro Warsaw 1944. "
Intii lagu guda jiray dagaalkii Vietnam, America "defoliated kun oo geedo meelaha ay Vietnamese ciidamada North communist qariyey khadadka sahayda iyo qabtaan dagaalka dhuumaalaysiga ah",  (eeg Operation raraya Gacanta). In dagaalka Soofiyeeti ee Afghanistan, ee uu taageerayo Mareykanka uu Soviet Mujaahidiinta doodayeen siyaasadda ah 'guban dhulka', baabuur wadid ka badan saddex meelood meel dadka ku nool Afghanistan maxaabiis ahaan (in ka badan 5 milyan oo qof), oo ay waxyeello ballaaran si ay tuulooyinka, Maqsinnadaydii, dalagyada, xoolaha, iyo nidaamyada waraabka, oo ay ku jirto macdanta dilaaga ah, iyo beero ballaaran iyo daaqa. , 
Waddamo badan oo casri ah oo ay isticmaalaan manhunting cilmiga in la raadiyo iyo baabi'iyo Xarakada gaar ah. [Reference?]
Qaar ka mid ah qorayaasha ku dagaal la-dagaallanka kacdoonka ay xoojinayaa dabeecadda dheeraad ah oo qasan ee deegaanka dagaalka dhuumaalaysiga ah maanta, halkaas oo ujeeddo siyaasadeed oo cad, iyo qaab-dhismeedka ka mid ah meelaha xisbiga sida Vietnam, Malaysia, iyo El Salvador ma aan caadi ahayn. Waxa ay labadaa qoraa tusay kala duwan khilaafka dhuumaalaysi ah xuddun u diin, qowmiyad ama xataa theme dambi ganacsi, kaas oo aanu isu amaahiyaan classic "xoreynta" template.
Helitaanka balaadhan ee internetka ayaa sidoo kale keentay in isbedel ku laxanka iyo qaabka hawlgallada dhuumaalaysi ah meelaha sida isuduwidda weerarada, isticmaalka maalgelinta, qorista, iyo khalkhalgelinta warbaahinta. Inkastoo tilmaamaha classical weli dalban, ciidamada la dagaalanka burcad-dhuumaalaysi ah maanta in ay aqbalaan fashion dheeraad ah oo soo dhexgala, hawlgalka habsami leh oo aan mugdi ku jirin. Sida laga soo xigtay David Kilcullen:
"Mucaaradka waxaa laga yaabaa in aan la isku dayayaan in ay afgembiyaan dawladda, waxaa laga yaabaa in aysan haysan istaraatijiyad isku xidhan ama wadi karaa hab ku saleysan diinta ay adag tahay in la diriraan hab dhaqameed. Waxaa laga yaabaa in ay jiraan kacdoonkii badan oo ku tartamaya in masraxa, taas oo macnaheedu yahay in counterinsurgent waa xakameeyo deegaanka oo dhan halkii Kulan gaar ah. tallaabo gaar ah iyo saamaynta shakhsi ahaan ah dacaayad "sheeko hal" Waxaa laga yaabaa in aad u balaaran ka badan horumar la taaban karo, haya'ad khasaaraha intaas ka badan oo aan toosan oo aan la saadaalin karin ka badan sidii hore. counterinsurgent ayaa, ma mucaaradka, waa bilaabi karaan khilaaf ah oo matalaya xoogga kacaan ah, xiriirka dhaqaale ee u dhexeeya Mucaaradka iyo dadka deegaanka noqon kartaa lid ku ah aragtida ah classical, iyo xeeladaha ee mucaaradka, haddii ay adeegsato saameyn dacaayad qaraxyo magaalooyinka, tirtireyso laga yaabaa qaar ka mid ah xeeladaha classic oo dadka kale, sida boliiska, khasaari in xaalado gaar ah, sidaas darteed, caddaynta muujinaysaa duurka, aragtida ah classical loo baahan yahay laakiin aan ku filan oo ay ku guuleystaan ​​ka dhanka ah ciidamada casriga ah. "
Jabhada MNLA ee waqooyiga Niger dagaalka 2008
Maxaad dagaalamaan dagaalka dhuumaalaysiga ah? Waa in aan soo gaarnay lama huraan in dagaalka dhuumaalaysiga ahaa reformer bulsho, ayuu maro qaaday oo uga jawaabno hub si careysan ka mid ah dadka ka soo horjeeda ay ku cadaadin, iyo in uu la dagaalamayay in la beddelo habka ay bulshada ka dhigaya oo dhan oo walaalo ah oo hubaysan ay ku dulli iyo murugo.
Sanadkii 1960, ee Markis kacaan Che Guevara horumariyo Foco (Spanish: foquismo) aragtida kacaanka ee uu dhuumaalaysi ah buug Dagaalka, oo ku salaysan wixii uu soo maray intii lagu guda jiray 1959 Cuban Kacaanka. Tani markii dambe waxaa si rasmi ah sida "focalism" by Régis Debray. Mabda'a ugu weyn waa in vanguardism by goobtooda ka mid ah oo yar, si degdeg ah ku socda kooxaha hubaysan ayaa ku siin kara diiradda ah carada ka mid ah dadka ka soo horjeeda xukuumadda oo ku fadhiya, oo sidaas keeni kacdoon guud. Inkasta oo hab bilowga ah waa in la abaabulo oo weerar ka dhulka miyiga ah, fikrado badan oo Foco habboon galay dhaqdhaqaaqa dagaalka dhuumaalaysiga ah magaalooyinka.
Baxyada Dagaalka by Nasution
Sida dadka Indonesia, waa in aad aqoon u leh guud ee la odhan jiray Abdul Haris Nasution, guud oo ku hogaamiyay horyaalka Siliwangi. Waxa uu yahay mid ka mid ah Jeneraaladii ugu wanaagsan ee Indonesia. Waxa uu ka socon awood leh, xoog, ka buuxay ruuxa ee waddaniyadda, oo uu leeyahay maskaxda cajiib ah. Isagu waa qoraaga phenomenal, "Dagaalka ka dhac ah Strategy" military ee
In ugu horeysay Independence Revolution (1946-1948), markii uu hoggaamiyay Siliwangi Qaybta, Nasution qaaday casharka labaad. Dadka u baahan yihiin si ay u taageeraan ciidamada. Laga soo bilaabo Sababtan awgeed, waxa uu ku dhashay fikirka ah dagaalka dhuumaalaysiga ah sida nooc ka mid ah dadka dagaalka. Habkani waa badan sii qaan ka dib markii Nasution noqday Taliyaha Qaybta ciidamada Java Independence Revolution II (1948-1949).
Sidaa darteed, waxa uu yaqaan horyaal u ah dagaalka dhuumaalaysiga aasaasiga ah dhanka ah gumeysiga Holland. Style ee dagaalka iyo ka dib caan ku General Sudirman. Fikradda dagaalka dhuumaalaysiga ah ayaa markii dambe waxaa la daabacay buug waa caadi aheyn at in waqtiga, Strategy dagaallama qaab dhuumaalaysi ah.
hadda, dhuumaalaysiga buugga Qorshaha Dagaalka, ayaa lagu turjumey luqado badan, xataa buugta tacliinta ciidamada khasabka ah ee dalal badan oo, ay ka mid yihiin dugsiga military ee adduunka ee aqoonyahanada, West Point, United States (US).
oo idinkuna waxaad ogaan, mid ka mid ah waxyaalaha qarsoon ee ka badiyaan Maraykanka tan iyo Vietnam markii Vietnamese ciidanka book.Now bartay, kitaabkan noqday buug tixraaca ee dugsiyada military oo dunida ku ah.
qaab jabhadnimo ah
Vietnamese Communists ayaa, ama Vietcong, waa laanta military ee National Liberation Front (oo NLF), oo la amray by Xafiiska Dhexe ee South Vietnam, oo ku yaalla meel u dhow soohdinta reer Cambodia. Waayo, hub, rasaas iyo qalab gaar ah, Vietcong waxay ku xiran yihiin raad Ho Chi Minh. Shuruud kale oo ku kulmay South Vietnam.
Qaybta ugu weyn ee ciidanka Vietcong Vietcong ahaayeen labisan, ciidamada waqti-buuxa ah, oo loo isticmaalo in ay weeraro baaxad weyn oo ay goob ballaaran. Ciidamada Gobolka ayaa sidoo kale waqti-buuxa ah, laakiin ku shaqeeya degmooyinka iyaga u gaar ah oo keliya gudahood. Haddii loo baahdo, unugyo gobolka yar isugu iman doonaan weerar ballaaran ah. Haddii cadaadiska noqdo cadow aad u weyn, oo waxay dumin doonaa unugyo yaryar iyo faafinta.
Si ka duwan ciidamada ugu weyn, oo waxay isku arkaan inay ciidan xirfad leh, kooxaha Vietcong deegaanka u muuqdaan in ay kalsooni badan noqon. Inteeda badan, qoranayaan dhallinyarada ah dhallinyarada, iyo halka u badan ayaa la-gasha shiilka, kuwa kale ayaa cadaadis ama ka xishoodaan in ay ku biiraan. Waxay sidoo kale shaki ka dhab ah oo ku saabsan awoodda ay u leeyihiin in ay la dagaallamaan ciidamada American hubeeyaan isla markaana tababaraan.
Markii hore, jabhadaha maxalliga ah la siiyey yar oo kaliya tababarka ciidamada lugta ee aasaasiga ah, laakiin haddii ay qorteen ee unugyada ugu weyn ee ciidanka, waxay heli kartaa ilaa bil ah tilmaamaha dabagal. Intaa waxaa dheer, waxaa jira daraasiin xarumaha qarsoon oo dhan South Vietnam tababarka madaxda kooxda iyo Freetown, hub iyo raadiyaha. Si loo hubiyo in jabhada la fahmo sababta ay u dagaalamayaan, dhamaan barnaamijyada tababarka, oo ay ku jiraan barashada siyaasadeed.
Bartamihii 1960-, inta badan oo ka mid ah awoodaha waaweyn ee ciidamada Vietcong hubaysan version Shiinaha oo ka mid ah AK-47 qoryaha darandooriga u Russia. Waxa kale oo ay u isticmaalaan noocyo kala duwan oo iftiin Soofiyeeti iyo Shiinaha oo dhexdhexaad ah qoryaha machine wax ku ool ah iyo qoryaha darandooriga u dhif ah, oo culus. Gaar ahaan, qoryaha machine guns qaali ah oo difaaca ka dhanka ah helicopters American.
Si aad u baabbi'iyo baabuurta gaashaaman ama Jeelal, baasuukayaal Vietcong lahaa qori ah oo aad u ku ool ah oo recoilless. Madaafiic ayaa sidoo kale waxaa laga heli karaa u tiro badan oo ay faa'iido u ah in aad si fudud u soo qaado.
Hub badan oo, ay ka mid yihiin dabin iyo miinooyinka, kuwaas oo macmal ah tuulooyinka. Ayaa wax safafka ka biiyo qasacad qayb ugu muhiimsan ee ay bixiyeen cadowga karto in lagu qubo ee xarigga, laakiin. Muddo sannad ah, iyadoo qarax dud ka tagi karo in ka badan 20,000 oo tan oo waxyaabaha qarxa ayaa la kala firdheen miyiga Vietnam. Weerar cirka ah ka dib, mutadawiciinta qaado dhar iyo ganacsi khatar ah ka bilowdey abuuro hubka cusub.
Ciidamada Local ayaa sidoo kale loogu tala galay hub heer hoose ah, qaar ka mid ah waxaa loogu talagalay in lagu cabsiiyo walax, laakiin qaar kale ay halis ku tahay. "U dabaan Punji" - kororka af qarsoon godad - si fudud gab laga yaabaa askari Col. Inta badan Punjis ula kac ah wasakhaysan kordhiyo halista cudurka.
Vietcong ku xeel dheer kacya yihiin iyo milmaan la xaafadda
sugnan Bishii December 1965, Ho Chi Minh iyo Vietnamese hoggaanka North amray in isbedelada habka dagaalka waxay ahayd in la diriray Koonfurta. Hadda waxa laga bilaabo, Vietcong ee dagaal ka dhistay meel la Mareykanka marka laga reebo suurtagalnimada in ay si cad u faa'iido waa fogaado lahaa. Waxaa jiri doona weerarro dheeraad ah ku dhufo oo ka iyo gaadmada. Si ay ula dagaalamaan American-urursiga, qorista Vietcong lagu wanaajin doono iyo in ka badan askar North Vietnamese Army dhex dhuuntaan doonaa South Vietnam.
Vietcong, ka dib tusaale ahaan ka mid ah kooxaha ka Chinese iyaga ka hor, ayaa had iyo jeer la siiyaa mudnaanta ugu sarraysa in la abuuro meel saldhig amaan ah. Tababarka ay, xarumaha saadka aasaasiga ah iyo xarunta. Waxay sidoo kale bixiyaan doonka ah ammaan ah oo waayahaas markii dagaalka tagaan xun.
Qariyey meesha salka ayaa mar walba mudnaan sare u Vietcong ah. Hadda, iyadoo diyaaradaha Maraykanka sahan meel kasta, waa muhiim u tahay si ay u ilaaliyaan. The meelaheeda dhoobada fog fog ama kaymaha, waxaa jira dhibaatooyin qaar ka mid ah, laakiin ka badan u dhow caasimada, waa badan way adag tahay. Jawaabtu waa in la dhiso nidaamka weyn ee sugnan dhulka hoostiisa.
Fari ka imanaya xarunta NLF ee gabi ahaanba waa cad. Tunnel The aan la daawayn, sida hoyga kaliya. Waxay kala dirireen saldhig awood u siinaya taageero joogto ah si ciidamada. Xitaa haddii tuulo waa in gacmaha cadowga, kaas oo hoos NLF weli samayn kari lahaa hawlgallo weerar ah.
Waxaa jira kaxeynayo waaweyn iyo kuwo yaryar kala firdheen dalka oo dhan. Tuulo kasta oo NLF lahaa qodo saddex mitir ee tunnel maalin. Xitaa waxaa jira buug heerka sheeg sida tunnel waa in la dhisay. Nidaamka tunnel ugu weyn ee ku yaalla Xagalka Iron iyo cu Chi Degmada, kaliya 20 km ka Saigon.
Askari An American si taxaddar leh baaris ugu sugnan Vietcong - waxay inta badan boobytrapped haddii
Xir-up: cu Chi
Saldhig Chuchi Gobol ee cu Chi waa shabakad ballaaran, iyada oo ku dhowaad 200 mayl ee sugnan. Xarumaha ay isticmaalaan ciidamada - qolka shir ama tababar meel - leeyihiin dhawaad ​​degdeg ah dhulka hoostiisa ku helaan. Albaabka dabin qarsoon hoos u keentay, markaas ka dhawray qol, u qaybta dheer. Marmar, laanta dib ugu dusha sare iyo qarsoodi kale keentay. Qaar ka mid ah xitaa furan qarsoon webiga biyo ama kanaalka ka yar.
Kulan heer qoto dheer, waxaa jira meel bannaan oo ku xardhay maqnaan warshadood oo hub iyo sidoo kale ah saldhigyada sahay biyo. Waxaa jira bariis hub LaasCaanood qolka lagu kaydiyo, iyo mararka qaarkood waxaa jira isbitaalka ama xarun caafimaad weeraryahanka. Tunnel isgaarsiinta Long xira salka la adag oo badan.
Jikada aasaasiga ah in had iyo jeer ku dhow yahay inuu dusha sare, la, shooladda xardhay-baxay dheer loogu talagalay fududaato qiiqa lagu kariyo oo yara fog sii daayo. Near jikada waa qolka hurdada dhuumaalaysiga ah, halkaas oo ay ku noolaan karaan loo todobaad waqti ah haddii loo baahdo. Meel kasta oo ka heer sare, waxaa jira tunnel ah in kor u keenaysaa in boqolaal biqil qarsoon si ay u difaacaan salaysan boostada.
Posted by needsjobslowongankerja at 6:55 AM